Muqdisho oo laga hirgalinayo Iskuulaad ‘lacag la’aan’ lagu dhiganayo - BBC News Somali
Muqdisho oo laga hirgalinayo Iskuulaad ‘lacag la’aan’ lagu dhiganayo
18 Disembar 2017
Maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay ee UNHCR ayaa shaaciyay mashruuc lagu dhisayo illaa 5 iskuul oo waxbarasho lacag la'aan ah lagu siinayo caruurta dadkii kasoo laabtay xerooyinka qaxootiga iyo waliba kuwa degan degmooyinka Muqdisho.
Warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiska duqa Muqdisho mudane Thaabit Cabdi ayaa lagu sheegay in ardayda wax la barayo ay gaarayaan 9 kun oo arday.
Isbedel ballaaran oo lagu sameeyay hoggaanka hay'adaha Amniga Soomaaliya
Dabkii ka kacay suuqa Bakaaraha oo la demiyay
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo ka hadlay shaqo abuurka kun dhalinyaro ah
Maamulku wuxuu dhaliilsan yahay in aan Banaadir waxba laga siin 18ka kursi
Wariyaheena BBCda ee Muqdisho Calinuur Salaad ayaa weeydiiyay duqa Muqdisho waxa mashruucan uu kaga duwanaan karo kuwii hore ee la maalgalin jiray, wuxuuna yiri "waxyaabaha aan ka duulayno waxa ay tahay maadaamaa dadka canshuur laga qaado, waxay dadkaas xaq u leeyihiin in canshuurtoodii ay dib ugu laabato, sida ugu wanaagsana waa in ubadkay ay waxbarasho helaan".
Waxa uu intaas ku daray duqa magaalada in UNCHR ay kaliya leedahay dayactirka dhismayaasha iskuulaadka, balse maamulka gobolka Banaadir in uu miisaaniyadiisa sanadlaha ah ku daray qarashka lagu kala socodsiinayo iskuulaadka sida mushaaraadka macalimiinta.
Guddoomiyaha oo warsaxaafadeed uga hadlay qorshayaasha fog ee maamulka ayaa yiri "Ujeedkeennu waa in ugu yaraan hal iskuul oo dowladeed laga helaa degmo kasta si carruurteennu u helaan waxbarasho lacag la'aan ah oo tayo leh. Waa arrin naga go'an inaan u istaagno carruurteena, waana maalgashi xooggan oo muujinaya isla xisaabtan" ayuu yiri Guddoomiyaha gobolka Benaadir ahna duqa Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed.
Inta badan dhismayaasha iskuulaadkii ay dowladda lahayd ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku shaqeeya iskuulaad gaar loo leeyahay, kuwaas oo ardayda ka qaada lacag. Guddoomiyaha ayaa waxa uu maamulka iskuulaadkaas ka dalbay in ay hoos u dhigaan lacagta ardayda laga qaado, islamarkaasna aysan badalin magacyadii rasmiga ahaa ee iskuulaadka.